Mpamatsy lasantsy zezika Double Shaft mirahalahy mpamatsy sy orinasa | YiZheng
ny Masinina mixeur zezika roa dia taranaka vaovao mifangaro fampifangaroana novolavolain'ny orinay. Ity vokatra ity dia fitaovana fampifangaroana vaovao izay afaka mahatsapa fandidiana mitohy sy famahanana ary famoahana tsy tapaka. Fahita eo amin'ny fizotry ny fikotranana ny tsipika famokarana zezika vovoka maro sy ny tsipika famokarana zezika granular.
Inona ilay masinina mixeur zezika roa?
Masinina mixeur zezika roa dia fitaovana fampifangaroana mahomby, arakaraka ny faharetan'ny fiara mifono vy, ny tsara kokoa amin'ny vokatra mifangaro. Ny akora fototra sy ny fitaovana fanampiana fanampiny dia ampidirina ao anaty fitaovana miaraka amin'izay ary afangaro amin'ny fanamiana, ary avy eo entin'ny mpampita fehikibo mankany amin'ny fizotran'ny granulation. ny Masinina mixeur zezika roa manangana firafitry ny rotor vaovao hanapotehana ireo fitaovana lehibe mandritra ny fanetsehana, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampifangaroana fanamiana bebe kokoa. Ny masinina dia manana firafitra matevina, famehezana tsara, fisehoana tsara tarehy ary fandidiana sy fikolokoloana mety.
Nampiasaina inona ilay Mixer Fertilizer Double Shaft?
Misy famaky helical symmetrika roa mihodina miaraka amin'ny vatan'ny Masinina mixeur zezika roa, ary ny axis helical dia miaraka amina pulp fihodinana mifanohitra. Ny vovon-tsolika dia hampiodina ny fitaovana manaraka ny fihenan'ny axial sy ny radial amin'ny zoro iray, mba hahafahan'ny fitaovana haingana sy mifangaro mifangaro. Ny fidiran'ny masinina amin'ny milina dia omena baffle tsy misy vovoka, izay afaka misoroka tsara ny famoronana zavona rano. Ny faritry ny fifandraisana eo anelanelan'ny ravin'ny pulp dia mifamatotra tanteraka amin'ilay fitaovana hahatonga ny fifangaroana ho bebe kokoa. nyMasinina mixeur zezika roa afaka manalefaka ny vovo-dronono rehefa manetsiketsika azy. Ny mason-tsivana amin'ny fitaovana matevina dia tsy lavenona maina na rano manondraka. Ny fanetsehana mando dia mametraka fototra ho an'ny fizotran'ny fitaterana sy ny granulation manaraka.
Fampiharana masinina mixer zezika roa
ny Masinina mixeur zezika roa dia mety amin'ny fampifangaroana zezika mihoatra ny roa karazana, premixes miampy, sakafom-pifangaroana, fika mifantoka, sakafom-pandraisana fanampiny, sns.
Tombony azo avy amin'ny masinina mixeur zezika roa
(1) Fahombiazana tena azo antoka.
(2) Fahafahana mampihetsika lehibe.
(3) Famokarana mitohy.
(4) tabataba ambany.
(5) Mora amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
Fampisehoana horonantsary Mixer Machine Double Shaft
Teo aloha: Mpanimba volo sy kitay hazo
Manaraka: Mpifangaro zezika marindrano
Fampidirana Inona ny masinina Rotary Drum Sieving? Ny milina Rotary Drum Sieving dia ampiasaina amin'ny fisarahana ny vokatra vita (vovoka na granula) ary ny fitaovana miverina, ary afaka mahatsapa ihany koa ny famolavolana ny vokatra, ka ireo vokatra vita (vovoka na granule) dia azo sokajina mitovy. Karazan-tena vaovao ...